BQ Aquaris X2 နှင့် Aquaris X2 Pro အသစ်၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ Androidsis
အာရုန်သည် Rivas | | Bq, NOTICIAS
စပိန်ကုမ္ပဏီ BQ တွင် BQ Aquaris X2 နှင့် Aquaris X2 Pro အဆင်သင့်ရှိသည်, အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့အရည်အသွေးများနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အတူကုမ္ပဏီနှစ်ခုအလယ်အလတ်အကွာအဝေး။
ဒီကိရိယာတွေကိုနာရီအနည်းငယ်အကြာမှာအတူတကွတင်ပြခဲ့တယ်နှင့် BQ သည်ဤဆိပ်ကမ်းအသစ်နှစ်ခုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်ဟူသောအဓိကအချက်နှင့်စပ်လျဉ်း။ နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးသည်စျေးကွက်တွင်ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းမထားသည့်အခြားဖုန်းများနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာများနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ ဤသယ်ဆောင်သောအလွန်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများ။ သူတို့ကိုသင်တို့ထံတင်ပြပါမည်။
1.1 BQ Aquaris X2 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
2 BQ Aquaris X2 Pro ကို
2.1 BQ Aquaris X2 Pro ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
3 စျေးနှုန်းနှင့် BQ Aquaris X2 နှင့် Aquaris X2 Pro တို့၏စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
Aquaris X2 Pro ၏အားနည်းချက်ရှိသော BQ Aquaris X2 အကြောင်းစတင်ပြောဆိုသွားပါမည်။ ဒီစမတ်ဖုန်းမှာ ၅.၆၅ လက်မ IPS LCD panel ကိုတပ်ဆင်ထားပြီး FullHD + Resolution 5.65 x 2.160 Pixels ပါးလွှာပြီးအဆင်ပြေပါတယ် 1.080: 18 မျက်နှာပြင် formatခြစ်ရာများနှင့်ပြန့်ပွားမှုကိုတွန်းလှန်ရန် Corning Gorilla Glass ကာကွယ်မှုပါရှိသော semi-curved 2.5D ဖန်သားပြင်နှင့်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဒီ ပြသ ၎င်းသည်အများဆုံးအလင်းရောင် ၆၅၀ nits အထိရောက်ရှိနိုင်ပြီး Quantum Color + နည်းပညာရှိသည်။
အတွင်းပိုင်း၊ Qualcomm Snapdragon 636 SoC သည်ဗိသုကာစုစုပေါင်း ၆၄ ခုရှိသည့်ဗိသုကာ ၆၄ ဘစ်နှင့် 64nm နှင့် Adreno 14 GPU တို့ပါ ၀ င်သည်။။ ထို့အပြင်၎င်းပရိုဆက်ဆာနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုရန်အတွက်၎င်းတွင်3/ 4GB RAM မှတ်ဥာဏ်၊ 32 / 64GB သိုလှောင်မှုနေရာနှင့် ၃၀၀၀၀ mAh ဘက်ထရီကိုမြန်မြန်အားသွင်းရန်အတွက်မိနစ် ၃၀ ခန့်အားသွင်းပေးသော Quaick Charge 3.100+ ကိုဘက်ထရီတပ်ထားသည်။.
ကင်မရာတွေမှာတော့ 12MP + 5MP ကို ​​focal aperturef/ 1.8 နှင့်အတူကျောဘက်ရှိ dual-ton LED Flash တပ်ဆင်ထားသည်။နှင့် selfie လှပစေရန် 8 megapixel shooter ရှိသည်။
BQ Aquaris X2 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
မျက်နှာပြင် ၆.၃ လက်မ IPS LCD FullHD + ၂,၂၈၀ x ၁၀၈၀p (၁၉: ၉)
လုပ်ငန်းစဉ် Qualcomm Snapdragon 636 (၁.၈ GHz အမြန်နှုန်းဖြင့် ၈ ဆ - Kyro 8)
ပြည်တွင်းသိုလှောင်မှု 32 / 64GB microSD မှတစ်ဆင့် 256GB စွမ်းရည်အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်
ချမ်ဘာ နောက် - Dual Pixel နည်းပညာနှင့် 12MP + 5MPf/ 1.8 dual sensor နှင့် Vidhance တည်ငြိမ်မှုရှိ 4K ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ မျက်နှာစာ 8MPf/ 2.0 AI နှင့်မျက်နှာအလှအပနှင့်အတူ
ဘက်ထရီ ၃၁၀၀ mAh လျင်မြန်စွာအားသွင်းခြင်း ၄.၀+ မြန်သောအားသွင်းခြင်းအတွက်ပံ့ပိုးသည်
အခြားအင်္ဂါရပ်များ နောက်လက်ဗွေဖတ်စက်။ Wifi 802.11b / g / n / ac dual band ။ Bluetooth 5.0 aptX USB Type-C ၃.၁ ။ စတီရီယိုအသံ။ Google Lens ။ NFC နည်းပညာ။ Dual SIM ပံ့ပိုးမှု
အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန် 150.7 x 72.3 x 8.35 mm ။ ၁၄၅ ဂရမ်
BQ Aquaris X2 Pro ကို
BQ Aquaris X2 Pro သည်ပထမ၏စွမ်းအားအမြင့်ဆုံးသော့ချက်ဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူပြောခဲ့ပြီးသောအရာနှင့်အခြားသောအရာများထက်ကွဲပြားသည်။ ဒီဖုန်းမှာ Qualcomm Snapdragon 660 octa-core 64-bit architecture နှင့် 14 nanometer processor နှင့် Adreno 512 GPU တို့ပါ ၀ င်သည်။,4/ 6GB RAM၊ 64 / 128GB သိုလှောင်မှုနေရာနှင့် Aquaris X2 တွင်တွေ့ရသောတူညီသောဘက်ထရီ - လျင်မြန်စွာအားသွင်း Quaick Charge 3.100+ ကိုထောက်ပံ့ပေးသော 4.0mAh စွမ်းရည်။
သင့်မျက်နှာပြင်ကိုကြည့်နေစဉ်၊ သူ့ညီငယ်ကဝတ်ဆင်ထားသောတူညီသောဝိသေသလက္ခဏာများရှိသောဘောင်ကွက်တစ်ခုကိုစုရုံးပါ။ ဒါကဓာတ်ပုံအပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး, ၎င်းတွင်မည်သည့်နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်ကိုမျှမပြုပြင်ဘဲပြုပြင်ထားသောတူညီသောဆုံးဖြတ်ချက်များ၏နှစ်ဆနောက်ဘက်ဒေါင်လိုက်အာရုံခံကိရိယာရှိသည်.
အထူးသ ဖုန်းနှစ်မျိုးလုံး၏ဒီဇိုင်းမှာအတူတူဖြစ်သည်ကျနော်တို့အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့, အတွင်းပိုင်းအပိုင်း, သူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုခွဲခြားထားတဲ့မှာအမှတ်ဖြစ်ခြင်း။ သတိပြုရမည့်အချက်ဖြစ်သည် ဒီကိရိယာတွေမှာ Android One ရှိတယ်update လုပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းများနှင့်အခြားတိုးတက်မှုများအရသူတို့ကိုပထမနေရာထား၏။
BQ Aquaris X2 Pro ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
လုပ်ငန်းစဉ် Qualcomm Snapdragon 660 (၄.၂ Kyro4ဖြင့် 260GHz နှင့် ၄ x Kyro 2.2GHz)
GPU ကို Adreno 512
ရမ်4/ 6GB
ပြည်တွင်းသိုလှောင်မှု 64 / 128GB microSD မှတစ်ဆင့် 256GB စွမ်းရည်အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်
အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန် 150.7 x 72.3 x 8.25 mm ။ ၁၄၅ ဂရမ်
စျေးနှုန်းနှင့် BQ Aquaris X2 နှင့် Aquaris X2 Pro တို့၏စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
အဆိုပါဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုအားလာမည့်ဇွန်လမှစတင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဟုကုမ္ပဏီကကြေငြာခဲ့သည်သူတို့အနက်ရောင်၊ အဖြူ၊ ရွှေနှင့်ငွေများကိုအောက်ပါဈေးများဖြင့်ရောင်းချလိမ့်မည်။
BQ Aquaris X2 3GB RAM + 32GB ROM: 299.90 ယူရို။
BQ Aquaris X2 4GB RAM + 64GB ROM: 329.90 ယူရို။
BQ Aquaris X2 Pro 4GB RAM + 64GB ROM: 379.90 ယူရို။
BQ Aquaris X2 Pro 6GB RAM + 128GB ROM: 499.90 ယူရို။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » BQ Aquaris X2 နှင့် Aquaris X2 Pro အသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ
Google Auto I / O 2018 တွင်တွေ့ရမည့် Android Auto သတင်း